आफु भन्दा कान्छो केटासँग मंसिरमा बिहे गर्न लागेको खबर फैलिएपछि पहिलो पटक स्वेताले मुख खोलिन्... | TajaKhabarTV
आफु भन्दा कान्छो केटासँग मंसिरमा बिहे गर्न लागेको खबर फैलिएपछि पहिलो पटक स्वेताले मुख खोलिन्…
२०७७, २४ कार्तिक सोमबार १३:०७ November 9, 2020 ताजा खबरमनोरन्जन
काठमाडौं | चर्चित नायिका स्वेता खड्काले धनगढीका विजयेन्द्र रावतसँग मङ्सिर ५ गते बिहे गर्न लागेको खबरले यतिबेला चलचित्र जगतको माहोललाई तताइरहेको छ । दशैंको टीका लगाएका बेला धनगढीका विजयेन्द्र रावतसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि स्वेताको विवाहबारे चर्चा बढेको हो ।
उनका बुबाको फेसबुक आईडी स्नेहाल्ता रावतको प्रोफाइलमा राखिएको तस्वीरमा देखिएकी महिला विजयेन्द्रकी आमा हुन् ।उनको तस्वीर स्वेताले २३ अप्रिलमा आमाको मुख हेर्ने दिन आफ्नो फेसबूकमा शेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ‘ह्याप्पी मदर्स डे टु माइ डियर मदर्स’ ।
जन्म दिने आमा, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी आमा र विजयेन्द्रकी आमाको तस्वीर स्वेताले किन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरिन् ? भन्ने प्रश्नले पनि स्वेता यी युवकसँग प्रेममा छिन् भन्ने अनुमान छ ।
विजयेन्द्र भगत मेटल सञ्चालकका छोरा हुन् । बुझिएअनुसार विजयेन्द्रभन्दा स्वेता धेरै जेठी छिन् । यो कुरा दशैँको टिकाका दिन एक युट्युब च्यानलाई अन्तरवार्ता दिनेक्रममा स्वेताकी आमा र स्वयं स्वेताले संकेत गरेका थिए । त्यहाँपनि विवाह को कुरा उठेको थियो ।
स्वेताले अहिले फैलिएको हल्ला गलत भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । स्वेताले आफू बिजनेश, माझी बस्ती र केही चलचित्रको काममा व्यस्त रहेकाले अहिले विवाह गर्ने मूडमा नरहेको बताइन् ।
हल्लाबारे जिज्ञासा राख्दा स्वेताले भनिन्, ‘विवाह हुने भने भने सबैलाई जानकारी गराउला । अहिले म सिंगल छु ।’ अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग २०७१ असार २३ गते स्वेताको विवाह भएको थियो । विवाह को एक महिना नपुग्दै श्रेष्ठको उपचारका क्रममा साउन २५ गते भारतमा निधन भएको थियो।
२०७८, २२ बैशाख बुधबार ०९:४८
२०७८, २० बैशाख सोमबार १२:४१
प्रियंका कार्कीले कपि गरेको यो पोजले सोसल मिडिया तात्यो, के होला यसको अर्थ ?
२०७८, ६ बैशाख सोमबार १०:११